प्रदेश-प्रतिनिधिसभा दोस्रो चरणको चुनाव ४५ जिल्लामा: कति छन् प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार ? | Emedia Hub UK
Home News प्रदेश-प्रतिनिधिसभा दोस्रो चरणको चुनाव ४५ जिल्लामा: कति छन् प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार ?
प्रदेश-प्रतिनिधिसभा दोस्रो चरणको चुनाव ४५ जिल्लामा: कति छन् प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार ?
काठमाडौं २१ मंसिर । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणअन्गर्गत निर्वाचनको मतदान कार्य सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगकका अनुसार आज विहान ७ बजेदेखि ४५ जिल्लामा मतदान सुरु भएको छ भने बेलुकी ५ बजेसम्म मतदानको प्रक्रिया जारी रहने छ ।
विहानैदेखि मतदान गर्नका लागि मतदाताहरु कोहि जाँदै आउने क्रम जारी र कोहिले मतदान गरिसकेको र कोहि लाईनमा मतदान गर्न बसिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ १२८ र प्रदेशसभातर्फ २५६ गरी जम्मा ३८४ निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदान हुँदैछ। देशका विभिन्न चुनाव क्षेत्रबाट शीर्षनेताहरुले मतदान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराबाट मतदान गर्दैछन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले चितवनबाट मतदान गरेका छन् । झापामा रहेका अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले अपरान्ह भक्तपुरबाट मतदान गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रतिनिधि-प्रदेशसभा: दोस्रो चरण निर्वाचनमा यसरी गर्नुहोला भोट
दोस्रो चरणको प्रदेश-प्रतिनिधिसभा चुनाव: कति प्रतिशत खस्यो मत ?